Ungaluguqula njani uxwebhu lwePDF ukuya kwiLizwi ngeendlela ezahlukeneyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uluguqula njani uxwebhu lwePDF kwiLizwi
Encarni Arcoya | | Amaqhinga
Ngokuqinisekileyo kwenzeka ngaphezu kweyodwa kuwe ukuba unayo uxwebhu lwePDF, mhlawumbi olo uzenzele lona. Kwaye xa usiya kukhangela, ufumanisa ukuba kukho upelo olugwenxa. Okona kubi kakhulu, kukuba uhlelwe ngokungalunganga, okanye iinxalenye zilahlekile. Kwaye ingxaki kukuba awunalo iLizwi, Oko kukuthi, awunakuyihlela. Wenzani ngoku? Ngaba uxwebhu lwePDF lunokuguqulwa lube liLizwi? Ewe impendulo nguewe.
Namhlanje sifuna ukuba luncedo kuwe kwaye, ukuba ungazifumana ukule meko, apho kufaneleke khona Guqula uxwebhu lwePDF kwiLizwiZazi izixhobo onokuthembela kuzo kuba ewe, zininzi, ezinye zisimahla kwaye ezinye zihlawulwe.
1 Ingcaciso ngaphambi kokuguqula uxwebhu lwePDF kwiLizwi
2 Guqula uxwebhu lwePDF kwiLizwi: ezona zixhobo zibalaseleyo
2.1 Guqula uxwebhu lwePDF kwiLizwi kwi-Intanethi
2.1.1 Google Drive
2.1.4 Guqula kwi-Intanethi kwi-PDF ukuya kwi-ODT
2.2 Iinkqubo zokuguqula uxwebhu lwePDF kwiLizwi
2.2.2 Guqula uxwebhu lwePDF kwiLizwi: Adobe
2.2.3 Nitro Pro
Ingcaciso ngaphambi kokuguqula uxwebhu lwePDF kwiLizwi
Ngaphambi kokuba uqhubeke ukukunika ukhetho olwahlukileyo olukhoyo lokuguqula iPDF ibe liLizwi, kuya kufuneka uthathele ingqalelo uthotho lweenkcukacha, ngamanye amaxesha, ezinganikwa ngqwalaselo kwaye isiphumo sinokuba sibi ngakumbi kunokuba besinjalo.
Kwaye yile, Uninzi lwezixhobo eziguqula iPDF ibe liLizwi zinengxaki yokwenza yonke into. Ngamanye amagama, unokufumana amagama kunye, amabinzana asikiweyo, imida emibi, okanye iingxaki zemifanekiso oyincamathisele kuxwebhu.
Oku akunakuthintelwa. Kukho ezinye izixhobo ezisebenza ngakumbi kunezinye (ewe, ezo zihlawulelweyo zezona zifumana iziphumo ezingcono).
Kuthetha ntoni oku? Nje ukuba uguqule olo xwebhu, sicebisa ukuba ulihlolisise ngokucokisekileyo ukunqanda iimpazamo okanye iingxaki zokuhlela.
Guqula uxwebhu lwePDF kwiLizwi: ezona zixhobo zibalaseleyo
I-PDF luxwebhu apho yonke into isayinwe ngokwemida kwaye inikwa "ukuqeqeshwa". Ke ngoko, ukuzihlela kunzima kakhulu, kwaye okuninzi kukuguqula kwezinye iifom ezinje ngeLizwi okanye enye yezona zisetyenzisiweyo, i-ODT (yeLibreOffice okanye iOpenOffice). Nangona kunjalo, ayinakwenzeka, enyanisweni, unezixhobo ezininzi onokuzenza.
Thina, Sizahlula ngokwamacandelo ngokuxhomekeke ekubeni ufuna ukukhuphela inkqubo (nokuba simahla okanye sihlawulwe), okanye ufuna ukuyenza kwi-intanethi.
Guqula uxwebhu lwePDF kwiLizwi kwi-Intanethi
Ukuba into oyifunayo kukuguqula uxwebhu lwePDF kwiLizwi kwi-Intanethi ngaphandle kokukhuphela nantoni na kwikhompyuter yakho okanye ukuthenga, ukhetho onalo kukwenza kwi-Intanethi. Ewe kuyakuthetha ukuba kuya kufuneka ulayishe uxwebhu lwakho kwi-Intanethi kwaye, ngamanye amaxesha, kumaphepha angaphandle ongazi ukuba benza ntoni kuxwebhu lwakho. Ke ngoko, ukuba yinto ebaluleke kakhulu, kwaye iyimfihlo, kungcono ukhethe esinye isixhobo.
Zeziphi iindlela esizicebisayo?
Ngaba ucinga ukuba uGoogle akanakukunceda ukuguqula loo PDF ibe liLizwi? Ewe unako. Into oyifunayo kukuba neakhawunti. Ngoku, kwiGoogle Drayivu, kuya kufuneka ulayishe ifayile yePDF onayo.
Emva kokuba ilayishiwe, iqhosha elisekunene liya kukunika ithuba lokuvula "Vula nge". Kwaye xa uyinika, baya kuphuma iinketho ezinjengePDF okanye kule meko Amaxwebhu kaGoogle. Ngale ndlela, iya kukubonisela ngoxwebhu oluhlelayo, kuba iya kuba ilawula ukuyiguqula kwaye ke unokuyigcina kwiLizwi (okanye kwenye ifomathi) ukuze ukwazi ukusebenza nayo, wenze utshintsho olufanelekileyo kunye Sombulula naziphi na iingxaki ezinokuba nazo i-pdf.
Unokuzikhuphelela kwikhompyuter yakho kwaye usebenze nayo ngaphandle kokuba ikwi-Intanethi. Kwaye nokucima loo maxwebhu kuya kuba sele (kuba usebenzisa isithuba kwilifu elilelakho kwaye ungacima into ongafuni ukuba lapho).
I-PDFToWord yiphepha lesithathu kwi-intanethi elinikezela nge Isixhobo sokuguqula uxwebhu lwePDF kwiLizwi. Konke okufuneka ukwenze kukufumana olu khetho, layisha uxwebhu kwaye ulinde uguquko.
Yenye yezo "sizithembayo", kuba apha awunakho ukufikelela kolo xwebhu ulilayishayo ukulicima xa sele uguqukile. Ukongeza, iziphumo zikumgangatho olungileyo.
Elinye lamaphepha anokuguqula ngokulula nangokulula iiPDF zakho zibe liLizwi. Isebenza ngendlela efanayo neyangaphambili, oko kukuthi, ukufaka uxwebhu kwiseva yephepha kunye nokunyamekela ukuguqula ukuze ukwazi ukukhuphela kamva.
Guqula kwi-Intanethi kwi-PDF ukuya kwi-ODT
Kuyafana nezangaphambili, kodwa ukongeza. Kwaye kunjalo Ukuba awusebenzisi iLizwi, kodwa ufuna uxwebhu oluhlelayo, njenge-ODT, ungayifumana ngesi sixhobo.
Sesinye sezixhobo ezilungileyo zokuguqula iPDF ibe yiLizwi kwi-Intanethi. Ukwenza oku, njengakudlulileyo, kuya kufuneka ulayishe ifayile yePDF kwaye linda ukuba ilayishe ukuqala kwayo ukuguqula.
Iinkqubo zokuguqula uxwebhu lwePDF kwiLizwi
Ukuba ukhetha ukufaka inkqubo kwikhompyuter yakho, nokuba ucinga ukuba ikhuselekile, kuba kufuneka wenze i-pdf ngendlela ethile, okanye kuba uyithanda ngcono, iindlela onokuzisebenzisa zezi zilandelayo:
Ukuba usebenzisa iLizwi, kuya kufuneka uyazi ukuba inkqubo ngokwayo isinika ukhetho lokuguqula iifayile zePDF. Ke akufuneki ukhangele ngaphandle. Kwaye yenziwa njani? Kulungile kufuneka vula iLizwi kwaye, kwimenyu yeFayile, ungacela ukuvula iPDF. Ngokucacileyo, uya kufumana isilumkiso sokuba ukuba uyayivula ngeLizwi, into eza kuyenza kukuguqula ngokuzenzekelayo kwaye uya kuba nakho ukuyihlela.
Ewe kunjalo, kufanelekile ukuba uyihlolisise ukuze kungabikho nto isukayo kule ndawo okanye uzifumane unamagama kunye.
Guqula uxwebhu lwePDF kwiLizwi: Adobe
Ewe, iAdobe yenye yeenkqubo ezaziwa kakhulu, kwaye unokhetho lokuguqula uxwebhu lwePDF kwiLizwi ngokulula. Ngapha koko, iyakwazi nokuhlela iPDF ngaphandle kokuyiguqula, enceda ekusombululeni ezo ngxaki ukhe waqubisana nazo ngaphandle kokuhlela uphinde ubeke uxwebhu kwakhona.
Ngokukodwa, sithetha nge-Acrobat DC, eyona nkqubo igqibe kakhulu kwiAdobe. Ewe akusimahla (unenguqulo yokulinga kuphela) ke, ukuba ufuna ukuyisebenzisa, kuya kufuneka uyithenge.
Kule meko unenye inkqubo yokukunceda uguqule uxwebhu lwakho lwePDF kwiLizwi. Ngaphandle koko, unako hlela, utyikitye, udibanise amaxwebhu kwaye uwakhusele nangegama eligqithisiweyo okanye ukuze angakhutshelwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Uluguqula njani uxwebhu lwePDF kwiLizwi
Ukudibana kwakhona kunika uvavanyo lweentsuku ezingama-90 zeenkqubo zalo ezintle kunye ne-50% isaphulelo kumaxabiso
Guqula umbala ongasemva womfanekiso kwiAdobe Photoshop